Sawirka maanta (Somaliland1991) Madaxweynaha dalka Island oo gashan kabo kala nooca waxaa maxay sababtu?? | Somaliland Hargeisa City
Sawirka maanta (Somaliland1991) Madaxweynaha dalka Island oo gashan kabo kala nooca waxaa maxay sababtu??
5 September, 2013 — somaliland1991
Eeg sawirka lugta bidix, Madaxweynaha dalka Island, Sigmundur Davíð Gunnlaugssons oo gashan kab aan la nooc ahayn ta midigta. Sida caadada ah marka suudhka ragu xidhaan waxaa loo gashadaa kabaha buudhka ee xaragada.
Sawirkan oo lagu faafiyey goobha Social media, ayaa ahaa kal loogu hadal-haynta badan. Dad badan ayaa is waydiiyey waa maxay sababta keentay in madaxweynah dalka Island, Sigmundur Davíð Gunnlaugssons, gashado labao kabo oo kal nooca, miyaanu ahayn qof masuula, maxaa ka dhigay ciyaalo suuq labo kabo oo kala nooca gashan.
Kulanka muuqaalkan oo ka dhacay aqalka raysal-wasaaraha dalka Sweden, Fredrik Reinfeldt, oo uu aabo shalay ku yimid dalka Sweden booqasho laba cisho qaadanaysa. Sawirka oo ah sawir ay wada galeen madaxweynaha dalka Maraykanka, iyo raysal-wasaarayaasha dalalka Norway, Denmark, Findland, Island, ee Iskandeneefiyanka, la isku yidhaahdo.
Jawaabta laga bixiyey sababta keentay in madaxweynah dalka Island gashado kab aan la noocahayn ta midigta, ayaa afhayeenka dalkaasi oo ka hadlaya yidhi waxaa aad noola soo xidhiidhay warbaahin badan iyagooo na waydiinaya sababta ay sidan u dhcday.
Wuxuu yidhi waa sawir funny, ah sababtuna waxa ay ahayd, In madaxweynaha dalka Island, intii uu diyaarada fuushan ee uu ku soo socday kulankan madaxweyne Obama ayaa lugtii barar badan keentay, markii uu soo degayna waxa lag geeyey dhakhtarka karolinska, Hospital ee Sockholm ku yaala ka dibna, waxaa la arkayin lugtu bararsan tahay, waxaana la siiyey dawooyin (Antibiotic) si lugta bararku uga dhaco. Sidaa darteed ayuu kabtan kale ee sports ka ha u gashaday.
« Ethiopia: Turkey Preparing to Create an Industrial Zone in Addis Ababa
Daawo sawirada Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama oo booqasho taariikhiya ku yimid dalka Sweden »